Віртуальна приватна мережа (VPN): Tari-dalana tena tsara ho an'ny mpanaradia
Ny serivisy Virtual Private Network (VPN) dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo aterineto dia miditra anaty afo avy amin’ny lalana maro. Ny orinasa dia miezaka manangona antontam-baovao maromaro kokoa amin’ny mpampiasa azy ireo raha toa ka manjary manjavozavo loatra izy (Tadiavo ohatra? Izany, izany, izany, ary izany) raha mizara ny fomba hitantanana nhahahahara nha toha -naraha nha toha -narana nha toha-nita toha.
* Heatmap misy toerana izay anangonan’ny NSA ny angon-drakitra amin’ny Internet amin’ny fampiasana Informatique tsy matotra, fitaovana fandalinana goavana ampiasain’ny United National Security Security Agency (NSA). Джерело: The Guardian
Nandritra пу taona Маро діам nampiasa fitaovana lehibe іграшка пу Facebook izahay, Google, Microsoft пу rindrambaiko ічних пу fandrosoana haingana kokoa пу teknôlôjia діам nanosika ireo orinasa ireo hamaha ireo mpampiasa ireo kaontim-baovao rehetra azony УОТП amin’ny sehatra ара-barotra.
Ary raha toa ny guvernemanta dia mety miezaka ny hifehy ny toe-draharaha, amin’ny tranga sasany dia izy ireo ihany no meloka amin’ny fahotana mitovy amin’izay sahirana amin’ny orinasa – fampidirana ny tsiambaratelo ay fanangonana ayy fanango dal anan fanango dal ангона ци міанкіна.
0.0.1 Поради експертів Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana будь amin’ny toerana samihafa, fa ny sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray будь amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adiresy IP nomena будь-яка amin’ny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara any Sina dia mety ho avy any Etazonia. Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro будь amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira cyber-criminals, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo. Mba hialana amin’ity olana ity dia tokony hanao fizahana tsara ny mpampiasa mba hanamarinana ny tena toerana misy ny VPN. Ireto misy fitaovana efatra azonao ampiasaina amin’ny: Ping Test Tool amin’ny CA App Синтетичний монітор Traceroute Tool amin’ny CA App Синтетичний монітор BGP Інструментарій для амінні компанії Sampana Electric Services Інструмент командного рядка для CMD в усіх Windows – Хамза Шахід, BestVPN.co Безпека
1.1 Загальні протоколи VPN
1.1.1 Раха фінтініна –
1.3 Протокол протоколу 2 рівня (L2TP)
1.4 3 – Фікіракіра Фітрандрахана фандефасана фіара (SSTP)
1.5 4 – Інтернет-обмін ключами версія 2 (IKEv2)
1.6 5 – “Фікіракіра танне тунелінг” точка-точка (PPTP)
2 Методи шифрування та міцність
3.3.1 1- мівантана
3.3.3 3- Ігрові
5 Фамаранана: Mila VPN ve ianao?
Ny mpamatsy sasany eny an-tsena dia mety tsy ho marina amin’ny fanolorana fanolorana azy. Mitaky izy ireo hanolotra servisy ara-pahasalamana будь amin’ny toerana samihafa, fa ny sasany amin’izy ireo dia tena virtoaly. Raha lazaina amin’ny teny hafa dia mety mifandray amin’ny mpizara iray будь amin’ny firenena iray ianao, fa mahazo adiresy IP nomena будь-яка amin’ny firenena hafa. Ohatra, ny mpizara any Sina dia mety ho avy any Etazonia.
Ratsy izany satria midika izany fa mandalo amin’ny tambajotra maromaro будь amin’ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao ny data mandra-pahatongan’ny farany. Tsy misy antoka fa ny mpikirakira cyber-criminals, maso-maso miafina miafina, na mpandika ny zon’ny mpamorona zon’ny mpamorona dia manana ny tanany amin’ny iray amin’ireo serivisy mpanelanelana ireo.
Ping Test Tool amin’ny CA App Синтетичний монітор
Traceroute Tool amin’ny CA App Синтетичний монітор
BGP Інструментарій для амінні компанії Sampana Electric Services
Інструмент командного рядка для CMD в усіх Windows
– Хамза Шахід, BestVPN.co
Amin’ny antsipiriany bebe kokoa, ny VPN dia mametraka fanambarana fifandraisana amin’ny fitaovana. It fitispika ity dia mamaritra ny fetran’ny fomba hivezivezin’ny angona avy amin’ny fitaovana amin’ny server VPN. Misy vitsivitsy misy протоколи VPN vitvivitsy izay mahazatra, na dia samy manana ny tombony sy ny ty fahampiana azy aza a ny tsirairay.
Раха фінтініна –
OpenVPN dia a протокол VPN з відкритим кодом Ary izany dia heriny ary koa ny fahalemena mety aminy. Матеріал з відкритим вихідним кодом azo atokisana amin’ny olona rehetra, izay midika fa tsi vitan’ny mpampiasa ara-dalàna ampiasaina sy hanatsara izany, fa ireo izay ty manana fikasana lehibe dia afaka manara-maso izany amin’ny fahalemena sy manararaotra izany.
Na izany aza, nanjary nanjary lehibe indrindra ny OpenVPN ary iray amin’ireo fiarovana azo antoka indrindra. Izy dia manohana ny ambaratonga avo lenta avo indrindra, anisan’izany izay heverina ho ny ‘asam-panavotana’ 256-бітний izay mitaky ny fanamafisana ny 2048-розрядний RSA, суто алгоритм XHUMX-біт SHA160 хеш.
Noho ny loharanom-baovao misokatra dia nampifanaraka koa izy io amin’ny fampiasana amin’ny sehatra rehetra amin’izao fotoana izao, avy amin’ny Windows sy iOS amin’ny sehatra iraisam-pirenena hafa toy ny router sy ny fiitaovana Малина Пі.
Indrisy fa ny fiarovana avo dia mananana ny ratsan-drivotra ary ny OpenVPN dia matetika hita fa miadana be. Na izany aza dia betsaka kokoa ny fifanakalozam-barotra, satria ara-dalàna fa ny avo kokoa ny tahan’ny fampitomboana ampiasaina, ny fotoana bebe kokoa handraisana ny fizotran’ny data.
Протокол протоколу 2 рівня (L2TP)
Протокол 2-го протоколу тунелю (L2TP) не підтримує Azi Tadin-Dokanga Momba ny tondradrano (PPTP) з протоколом переадресації рівня 2 (L2F). Indrisy anefa, satria tsy nahafeno fepetra ny famaha ny fifandraisana dia matetika nozaraina miaraka amin’ny fiarovana IPsec. Hatramin’izao, io fitambaran-javatra io dia heverina ho toy ny fiarovana sy tsy Manana уразливості hatramin’izao.
3 – Фікіракіра Фітрандрахана фандефасана фіара (SSTP)
Ny SICP (Secure Socket Tunneling Secure Socket) dia iray amin’ireo olona tsy dia fantatra loatra eo amin’ny olona tsy mahazatra, saingy tena ilaina izy io satria efa nosedraina tanteraka, nosedraina ary nifatotra tamin’ny fampidira ‘я Vista SP1.
Tena azo antoka koa izany, amin’ny fampiasana ny SSL / TLS 256-бітний SSL / TLS ary ny 2048-бітний біт. Про індріси факту та Microsoft Microsoft Іхани Коа, нікому не відомо діа мисакатра хо an’ny фанадінам-panjakana izany – індрай, цара си раці.
4 – Інтернет-обмін ключами версія 2 (IKEv2)
Ny Internet Key Exchange, версія 2 (IKEv2), діалогове новоутворення Microsoft, що займається системою Cisco ary am a boalohany dia natao ho toy і протокопія тонеліна. Ізи іо коа діа мампіаса IPSec ho an’ny шифрування. Ny fahaizany miverina amin’ny fampifandraisana ireo fifandraisana дуже dia nahatonga azy ho be mpitia eo amin’ny olona izay manararaotra azy noho ny fampielezana VPN amin’ny finday.
5 – “Фікіракіра танне тунелінг” точка-точка (PPTP)
Протокол протоколів протоколів Ny протоколів тунелювання точка-точка (PPTP) і i amin’ireo dinôzôra eo amin’ireo протоколів VPN. ny протоколів талоха VPN. Na dia mbola misy aza ny fampiasana sasany, dia nidina an-dalambe io lalana io noho ny fiakarana midadasika be loatra amin’ny filaminana.
Manana izany уразливості ary nalain’ireo olon-dratsy sy ratsy fanahy ela tany aloha, ka tsy mahafinaritra intsony. Raha ny marina, ny fahasoavana ihany no maharesy azy. Araka ny nolazaiko taloha, Ny fiarovana azo antoka kokoa dia ny fihenan-dàlana haingana kokoa dia ny mahita ny fihenanam-bahoaka.
Методи шифрування та міцність
Ny fomba tsotra indrindra hamaritana ny famaritana izay azoko eritreretina dia mety hanakorontana ny fampahalalam-baovao ka ny olona iray izay manana torolàlana amin’ny fomba nandraisanao azy dia afaka mandika izany amin’ia dikany.
Makà ohatra iray tokana – Кіт.
Raha ampihariko amin’ny teny iray ny rakitra 256-бітний, dia ho tototry ny lozam-pifamoivoizana tanteraka sy tsy hay sakanana izy io. На діа нй суперкомп’ютер mahery indrindra eto an-tany aza dia hitondra an-tapitrisany an-tapitrisany amin’ny fiezahana hamaha io teny tokana io miaraka amin’ny famenoana 256-бітний izay nampiharina taminy.
Ankoatra izany, ny ambaratongam-pehezantenim-panandevozana dia ny endriny, ka noho izany dia tsy manolotra ny anntsasaky ny fiarovana ny famenoana 128-розрядний 256-бітний. Na dia mbola marefo aza ny manam-pahaizana dia mino izany Ny kapila 128-бітний діа-хо тапака ци ци хола.
Ireo fomba fitahirizana sy tanjaka ireo dia ampiharina matetika, arakaraka ny fampiharana ampiasaintsika, іграшка ny mailaka, ny navigateur, na ny programa hafa. VPNs amin’ny ankilany kosa dia mamela antsika hisafidy izay karazan-tindrana tadiavintsika, satria ny karazan-цика fidintsika dia hisy fiantraikany amin’ny fahombiazan’ny VPN.
Efa lasa aho izao fikarohana, fitsapana ary fanandramana amin’ny VPN ho an’ny ampahany tsara kokoa amin’ny herintaona. Na dia mety tsy ho manam-pahaizana ara-teknika amin’ny VPN aza aho, dia azoko antoka fa efa fantatro mihoatra noho ny tena tadiaviko mamba ireo tolotra ireo.
Tys maintsy miteny aho fa amin’ny faran’ny andro, na inona na inona fahaiza-manao amin’ny vokatra iray, dia tsy misy antony tokony hanesoran’ny orinasa iray amin’ireo orinasa ireo ny fanararaotana mpanjifa ratsy. Ary eny, tiako ny ty fahaizana sy ny malaina ho toy ny ‘fanompoana mpanjifa ratsy’.
Ny zavatra tena manan-danja nianarako momba ny fitaovana dia ny hoe raha mikasa ny hampiasa ny VPN mivantana eo amin’ny router ianao dia mila mahatsapa ny tena zava-dehibe iray – ny VPN anao dia tsy maintsy Manana processe ass-kick. Matetika izy ireo no voafetra amin’ny faran’ny ‘oh-my-God’ mpividy Wireless mpanjifa, ary na izany aza, dia voafetra ihany.
Ny karazana router mila ilaintsika dia eo amin’ny andaniny ROG Rapture GT-AC5300 або Netgear Nighthawk X10 – Sarotra fa ty ny fitsipika ankapobeny ho an’ny ankamaroan’ny tokantrano. Na dia haingana aza ny hafainganam-pandehan’ny aterineto dia ny router no hijanona ho azy.
Tamin’io fotoana io ihany aho no nifindra tamin’ny laharana haingana kokoa, ka nahattikaritra ny tolona VPN maro mba hitantana izany haingam-pandeha izany noho ny antony maromaro. Anisan’izany ny fitaovana ampiasainao, ny elanelana eo anelanelanao sy ny mpizara VPN izay nofidinao, ny sandan’ny dikan-teny tianao, ary ny maro hafa.
Tsy dia milalao be loatra aho (farafaharatsiny ty ny lalao izay zava-dehibe ho an’ny fahombiazan’ny VPN) fa nanamarika ny fotoana ping. Раха mpilalao te hanandrana mampiasa VPN ianao mba hiditra amin’ny lalao iray tsy ao amin’ny firenenao, mety ho diso fanantenana ianao. Ny fotoana ping dia mitombo bebe kokoa noho ianao avy amin’ny server VPN, na dia haingana sy haingana aza ny hafainganam-pandeha.
Toa ireo mpamatsy serivisy rehetra, ny orinasam-pifandraisan’ny VPN dia maniry anao hijanona miaraka aminy mandritra ny fotoana maharitra, satria io no fidiram-bolan’izy ireo. Ny ankamaroan’ny mpanome tolotra VPN dia manolotra fehezan-dalàna isan-karazany іграшка ny isam-bolana, isam-bolana sy ny sisa. Matetika ny fotoana lava kokoa ny drafitra, ny mora kokoa ny isam-bolana isam-bolana, fa tys maintsy handoa mialoha ny fifanarahana rehetra ianao. Manantena handoa eo anelanelan’ny $ 9 ka karamin’ny $ 12 isam-bolana amin’ny fifanarahana isam-bolana, miaraka amin’ny fihenam-biy hatramin’ny 75% ho an’ny fifanarahana maharitra.
Ireo VPN dia natao voalohany sy lehibe indrindra hiarovana ny mombamomba anao ary hitazona hatrany ny angon-drakinao. Mampalahelo fa ny iray amin’ireo lafiny vokatry ny шифрування izay ampiasaina amin’ny fiarovana ny data dia ny mampihena ny fifandraisanao amin’ny Internet. Amin’ny maha-fitsipika ankiby, manantena fa hahatratra mihoatra ny 70% amin’ny hafainganao ny hafainganana rehefa mampiasa VPN. Ny Антоні Хафа іграшка ny halaviran’ny mpizara VPN, ny vesatry ny mpizara sy ny sisa dia hisy fiantraikany amin’ny hafainganam-pandehananao amin’ny Internet mampiasa VPN.
Amin’ny mety dia tokony ho tsotra tahaka ny fametrahana fampiharana iray ary miditra ny anaranao sy ny tenimiafinao. Avy eo ny zavatra tsy maintsy ataonao dia tsindrio bokotra iray ary hatambatra amin’ny mpizara VPN ianao. Mampalahelo fa tsy izany no vahaolana tsara indrindra ary ny fifandraisana sasany dia mety mila hatsaraina ho an’ny fampisehoana tsara indrindra. Mpanome tolotra VPN maro an’isa іграшка NordVPN, Surfshark ary ExpressVPN dia hanana torolalana momba ny fomba fanaovana izany, ци hahomby izay fotoana hifandraisana amin’ireo mpiasa amin’ny serivisin’ny mpanjifa.
Miankina amin’ny mpanome serivisy VPN izay misoratra anarana aminao. Зрозуміло, що в реконструкції буде розміщено вікно Windows, MacOS з Linux та іншим комп’ютером. Betsaka koa no hanohana ny fampielezana ny router () raha misy vitsivitsy mifanentana amin’ny fitaovana mana-tarehy hafa toa ny Raspberry Pi.
256-розрядне шифрування Satria ny, діафрагмасана, фіфандраїсако, і 128-бітове шифрування.?
Відобразить VPN веб-переглядача mampiasa fanitarana?
Nanandrana ny fanitarana tranokala VPN vitsivitsy aho ary nahita fa ny ankamaroany dia latsaka ao anatin’ny sokajy roa lehibe. Misy ireo izay maneho ny proxy ary manaparitaka ny fifandraisanao amin’ny mpizara iray, ary ny sasany izay miasa toy ny fifehezana navigateur amin’ny fampiharana VPN feno. Ity farany dia midika fa mbola mila paikan’ny VPN napetraka ianao mba hampiasana ny fanitarana. Наявний фамільномобільний транокал VPN діаметика ци вп послуг.
Ені ар ія. Na dia tsy manana lalàna manohitra ny fampiasana VPN ny ankamaroan’ny firenena, ny sasany kosa dia mandrara izany. Amin’ny tranga henjana be, ny firenena sasany dia tsy mandrara ny fampiasana VPN ihany fa mety hampiditra am-ponja ireo mpampiasa VPN. Soa ihany fa misy firenena vitsy monja izay voararan’ny VPN hatramin’izao.
Фамаранана: Mila VPN ve ianao?
Ny tsiambaratelo manokana ao anaty aterineto dia iharan’ny fahirano amin’ny teboka maro ary toa toa nitranga tamin’ny alina izany. Voaroaka ireo andro anday tsy maintsy hiahiahy momba ireo mpanao heloka bevava aterineto, fa ankehitriny koa dia tokony hanahy amin’ny orinasa isika upravenemanta izay te hangalatra ny angon-drakitra noho izany tonyyonyo mano.
Валанявабатрий варотра Global VPN (arivo tapitrisa, USD) – Лохарано: Статистика
Na izany aza, avy amin’ny tahan’ny fitomboan’ny ny hasarobidin’ny tnana VPN manerantany, Dia hilaza aho fa tena azo inona fa fa mila iray na roa na impiry ianao. Fotoana izao no nanombohan’ny mpiserasera tsirairay nanokana ny fiainany manokana sy ny filaminana an-tserasera ho an’ny zom-pirenena ary hitady fomba ahazoana antoka ny fampahalalam-baovao.
Nahay tamim-pahatsorana tamin’ny fampiasana Internet izahay ny fomba iray izay ananantsika hatrany, fa ny mijery fotsiny no tsy misy ahiahy. Marina fa virijiny sy malware no nahatonga anay ho malina, saingy ty niova firy.
Raiso ohatra ohatra ny olona te-handeha an-tserasera ary hitady sary vitsivitsy amin’ny saka mahafatifaty. Eo am-panaovana izany dia misy ny fampahalalana іграшка ny toetrany fitadiavana azy, tiana / tsy tiany, toerana ary zavatra maro hafa nangonin’ny manam-pahefana na fikambanana. Циси ампі ве ізані фіхеверана мампатахотра ізані ве мба ханерена ірео фіхеціка?
Ny serivisy Mạng riêng ảo (VPN) dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria
Ny serivisy เครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) โดย somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo
Sanal özel ağ (VPN) dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoana izao satria ny tsiambaratelo
Ny serivisy Virtual Private Network (VPN) dia somary lohahevitra mafana amin’izao fotoanale izao satria
Virtuálna súkromná sieť (VPN) sa môže nachádzať v blízkosti mafana amin’izao a je na